Izinhlelo Ezintathu Odinga Ukuziqhuba Ngebhizinisi Lakho Le-ecommerce Ngokushesha | Martech Zone
Kunabathengisi abaningi be-ecommerce laphaya - futhi ungomunye wabo. Ungaphakathi kulo isikhathi eside. Ngakho-ke, udinga ukwazi ukuncintisana nezitolo ezinhle kakhulu ezingamakhulu ezinkulungwane eziku-inthanethi eziku-Internet namuhla. Kepha ukwenza kanjani lokho?
Udinga ukuqiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho injenge kuyathandeka ngangokunokwenzeka. Uma idizayinwe kabi, ayikwenzi ube negama elihle, amafonti akho mancane kakhulu (noma makhulu kakhulu), i-logo yakho ihlangana nesizinda sesitolo sakho esiku-inthanethi, izinkinobho zokuzulazula zisendaweni engeyinhle (cabanga ibha yokusesha!), noma uma imibala oyikhethile kuwebhusayithi yakho yenza ingasebenzi kahle ngesiko olithengisela kulo, lapho-ke uzodinga ukucabanga kabusha ngomklamo wakho. Yilapho uqala khona.
Uma isitolo sakho se-ecommerce sine- professional uzwe ngakho, lapho-ke udinga ukubheka imikhiqizo oyithengisayo. Ingabe yizo ezikhanga izethameli ezibanzi, noma ngabe uhlose iqoqo elithile lamakhasimende? Noma iyiphi indlela ilungile, kepha ingathinta impumelelo yakho uma unganakekeli amakhasimende akho. Futhi, ingabe lezi zinto zisezingeni eliphakeme, noma ingabe zingeniswa ezishibhile? Uma imikhiqizo yakho iwa phakathi, nawe uzoba njalo.
Bheka ifayela lakho le- marketing. Uthengisa kanjani ibhizinisi lakho? Yimaphi amasayithi okhangisa kuwo futhi asebenza kangakanani lawo mapulatifomu? Ingabe ukusetshenziswa kahle kwemali yakho? Qiniseka ukuthi uthola i-bang enkulu ngemali yakho futhi imizamo yakho isebenza kahle ngangokunokwenzeka.
Uma konke lokho kuyasebenza, sekuyisikhathi sokuhambisa ibhizinisi lakho kalula. Uma konke okunye sekukhona, ungaqala ukubheka izinqubo nemisebenzi yakho ukwenza ngcono ukuthengwa kwamakhasimende, ijubane lenkonzo, nokugcwaliswa kwempahla.
Ukukusiza ngalezi zici zebhizinisi lakho, sixoxa ngezinye zezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ongaba nazo ukuphatha isitolo sakho se-ecommerce.
The -Google Ama-Analytics app uzokunika onqenqemeni kuzo zombili izici zokumaketha zebhizinisi lakho nokuthengisa. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulandelele ukuvakashelwa kwakho kuwebhusayithi. Ungabona inani lokubukwa elitholwa yikhasi ngalinye ngalinye. Ungabona futhi nenani lokuvakashelwa abakutholayo ngokuhamba kwesikhathi, kunqunywa ngezihlungi ozibeke kuhlelo lokusebenza.
Lolu hlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ubone ukuthi imibono ivela kuphi. Iningi lamathemba ekhasimende lakho kungenzeka ukuthi lithenga isiza sakho se-ecommerce sivela phesheya kwezilwandle futhi awukuqapheli. Ukubona lokhu kuhola kuzokuvumela ukuthi ushintshe imodeli yebhizinisi lakho futhi unikeze isitolo sakho esiku-inthanethi kakhulu kumakhasimende angaphandle anentshisekelo yokuthenga imikhiqizo yakho.
Futhi, ngokubona amakhasi athengisayo, ungabona izinhlobo zemikhiqizo abathengi bakho abayithengayo. Lokhu kuzokunikeza ithuba lokusula noma yiziphi izinto ezingathengisi bese uletha ulayini wemikhiqizo amakhasimende akho ayifunayo.
Bhalisela i-Google Analytics
Lena lokusebenza emangalisayo! Amabhizinisi wezitini nodaka kufanele bathembele kumodeli yendabuko yokuhlinzeka izitolo zabo ngemikhiqizo: kufanele bathole abathengisi abaphethe imikhiqizo abafuna ukuyiphatha ezitolo zabo, bese beyithenga ngamanani amaningi ukuze bathole amadili entengo amahle kakhulu (noma ngoba I-wholesaler idinga ukuthi kufinyelelwe kusayizi we-oda omncane).
Ngemuva kwalokho kufanele balinde umkhiqizo ukuthi ufike emasontweni kamuva. Endabeni yabathengisi bamaketanga abanjengoWal-Mart neTarget, izinto ezisezingeni eliphakeme kumele ziqale zilethwe esikhungweni sokusabalalisa ngaphambi kokuba zihlelwe, zilayishwe esitolo ngasinye, bese zithunyelwa ezitolo ezihlukile.
Abathengisi be-ecommerce bazoncika kubathengisi bendabuko iningi lemikhiqizo yabo. Kepha izikhathi ziyashintsha, futhi u-Oberlo unikeza izitolo ezincane, eziku-inthanethi indlela engcono yokuthengisa imikhiqizo yabo.
Esikhundleni sokuthenga kumphakeli ngobuningi, awudingi uku-oda into - okungenani kuze kube yilapho ikhasimende lifaka i-oda. I-Oberlo ikuvumela ukuthi ungenise imikhiqizo evela ezinkulungwaneni zabahlinzeki ngqo esitolo sakho esiku-inthanethi. Ngemuva kwalokho uzobeka i-oda lekhasimende kumphakeli. Umhlinzeki uzobe esethumela i-oda emnyango wangaphambili wekhasimende.
Lolu ushintsho olukhulu ebudlelwaneni obujwayelekile bomthengisi / be-wholesaler ngoba umthengisi akudingeki akhokhele inani elikhulu lemikhiqizo. Into ivele iqonde ngqo kumthengisi iqonde kumthengi.
Bhalisa mahhala e-Oberlo
I-SalesforceIQ ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ze- Ukuphathwa kobudlelwane beKhasimende. Lolu hlelo lokusebenza lunikeza amandla okusabela ezindabeni zamakhasimende; uma kunenkinga kuzinqubo, amakhasimende akho nakanjani azokwazisa. Lolu hlelo lokusebenza lwe-CRM luzokuvumela ukuthi uphendule kulezo zinkinga, ngokubuka kwekhasimende nangokubona kwakho kwangaphakathi. Ungaqala ukulungiswa kwenkinga ngokushesha.
ISalesforceIQ ibuye ihlanganise zonke iziteshi zakho zemidiya yokuxhumana nabantu kwisikhulumi esisodwa esimaphakathi. Ungakwazi ukufinyelela izivakashi zakho ezijabule futhi uhlanganyele nazo, uzibonge ngendlela wonke umuntu angabona ngayo. Ungahlanganyela nabangani nabangane babangani bamakhasimende akho ngenhloso yokuwaguqula abe ngamakhasimende amasha. Ngalolu hlelo lokusebenza lwe-CRM, ungakhiqiza ibhizinisi eliphindayo futhi uqalise ukusakazwa okusha kwemali engenayo esitolo sakho se-ecommerce.
Ngalezi zinhlelo zokusebenza, uzokwazi ukuphatha ibhizinisi lakho ngempumelelo nangendlela efanelekile. Uzokwazi ukugcina ukukhethwa komkhiqizo wakho kanye nasesitokisini ngenkathi usebenzisa ithuba lokuxhumana nabathengisi nabaphakeli ukuze kugcwaliswe ngokushesha.
Uzokwazi futhi ukuphatha ubudlelwano bamakhasimende akho nokusebenzisana, futhi umakekele abanye abangahle babe khona. Ukubuyekeza ukuthengisa okuvela kulezi zinhlelo zokusebenza kuzokunika namandla okusabela kumathrendi webhizinisi ngesikhathi sangempela, kukunikeze ithuba lokwandisa ukuthengisa ngalo lolo suku.
Ngalezi zinhlelo zokusebenza, uzokwenza ibhizinisi lakho lisebenze kahle futhi liqhudelane.
Bhalisela i-Free SalesforceIQ Trial
Tags: ezokuhweba ngekhompyuthaabathengisi ababalulekile